🥇 ▷ Daraasadda ka dib Anthem waxay leedahay "dhowr mashruucyo waaweyn oo sir ah" oo xagga horumarka ah ✅
Daraasadda ka dib Anthem waxay leedahay “dhowr mashruucyo waaweyn oo sir ah” oo xagga horumarka ah
Aagagga Deegaanka | Booskaaga ciyaaraha fiidiyowga, filimada, taxanaha iyo filinka ‘Areajugones’ | Booskaaga ciyaaraha fiidiyowga, filimada, taxanaha iyo anime – Waxaad ka heli doontaa wax kasta oo la xiriira PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, iyo dhammaan filimada, taxanaha iyo waxyaabaha anime
BioWare, daraasada ka dambaysa dhawaanahan oo aan si fiican loo dhaleeceyn Heesta, ayaa soo food saartay sannado adag. Daabacaadda ka dib Saamaynta Mass: Andromeda in 2017, soo dhaweynta taas oo si weyn uga duwanayd filashooyinka daraasadda, abuurayaasha Da’da masduulaaga Waxay soo mareen geedi socodyo horumarineed oo isku dhafan, oo ay ka buuxaan dhibaatooyin iyo natiijooyin xun. Si kastaba ha noqotee, hoos u dhigista suurtagalnimada shirkadda waxay noqon laheyd khalad maxaa yeelay, waa in la xasuusnaadaa, waa mid ka mid ah kooxaha ugu caansan tobankii sano ee la soo dhaafay, sidaa darteed mashruuc kasta oo hoosta laga xarriiqay, ugu yaraan, wuxuu soo jiidan doonaa dareenka warshadaha.
Markaa, shirkaddu waxay daabacday galitaankeeda Blog taas oo Casey Hudson, madaxa daraasadda, uu ka hadlay mustaqbalkeeda. Dhinacyada kale, warqaddeeda ugu habboon waxay ku jirtaa xaqiijinta taas, marka lagu daro Masduulaagii da’da 4, ciyaar horay loo xaqiijiyay, waxay leeyihiin mashaariic dheeraad ah abuurista, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid aad u qarsoon. Gaar ahaan, wuxuu faahfaahin ka bixiyay: «Waxaan haynaa mashaariic kale oo badan oo waaweyn oo horumarineed. Waxaan jeclaan lahaa inaan wax intaa ka badan ka sii sheego oo ku saabsan iyaga, laakiin inta badan waa sir sir ah hadda. Si kastaba ha noqotee, waxaan dhihi karaa mid ka mid ah mashruucyadeenna waxay leeyihiin koox weyn oo soo koraysa Edmonton oo ka shaqeyneysa soo-saaridda iyo, iyada oo ku saleysan horumarka aan arko, waan xaqiijin karaa taas, shaki la’aan, Wolf argagaxa ayaa taagan«.
Heesta calanka ayaa soo bandhigaysa hagaajinta iyo astaamaha patch 1.4.0
Toddobaadka 5aad ee “Anthem Cataclysm” waxay ku dhowdahay inay bilaabato, maalin maalmaha ka mid ah. BioWare ayaa shaaca ka qaaday waxa ku soo kordha cusbooneysiinta toddobaadlaha cusub: goobta ugu dambeysa ee Cataclysm, cusboonaysiinta xilli xilli cusub ee…
Dareenkaas, tixraaca ugu dambeeya ee ay wadaagaan bayaanku waa tixraac cad oo ku saabsan dhacdooyinka ugu dambeeya ee Da’da Maskaxda: Weydiimaha iyo xiriirka ay la leeyihiin gudbinta IP ee xiga. Dhinaceeda, waxa mashaariicda harsan ay ku saabsan yihiin wali lamaqlo, laakiin waxaan aad uga taxadiri doonnaa si aan u ogaano waxa Biyo-Weyn ee weyn ay ku hayso gacantiisa.
Daraasadda kadib Anthem waxay leedahay “dhowr mashruucyo sir-culus oo waaweyn” oo hoos imanaya Ronald Goncalves